Ciidamada ilaalada Madaxtooyada oo Rasaas u adeegsaday Shacab dibad baxyo dhigayay.
Shirkii dhaxmari lahaa Farmaajo iyo hoggaamiyaasha maamul goboleedyada oo baaqday.
Wednesday November 28, 2018 - 09:45:48 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Weerarkii aad u qorsheysnaa ee maalin ka hor ka dhacay magaalada Gaalkacyo oo lagu dilay Ninkii Nabinimada sheegtay islamarkaana Aflagaadeeyay Nabiga SCW ayaa bogaadin iyo hambalyo kala kulmay shacabka Soomaaliyeed.
Tobanaan kun qof Soomaali ah oo baraha bulshada Fikirkooda uga dhiibtay sida ay u arkaan weerarkii lagu khaarijiyay Cabdi Wali Cilmi Yare gaalkii Nabinimada sheegtay ayaa muujiyay sida ay ugu faraxsanyihiin weerarkaas iyagoo duco iyo hambalyo hawada umarayay Xarakada Al Shabaab.
Wuxuu ahaa weerar mideeyay muslimiinta Soomaalida marka aad eegto sida shacabku shucuurkooda diimeed umuujiyeen, dadka qaar ayaa oranayay in weerarkan uu ahaa midkii ugu kheyrka badnaa ee Al Shabaab ay abid ka fuliso Soomaaliya.
Idaacadaha ku hadla Afka Soomaaliga ee ushaqeeya dowladaha Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa ku fadeexadoobay qaabkii ay utabiyeen dhacdadii magaalada Gaalkacyo oo ay ku sifeeyay "wadaad ladilay", waxay dhacdada udhigayeen Nin sheekh suufi ah oo lagu xadgudbay!.
Iska dhega tiridda labadan idaacadood ee dhacdadan weyn waxba matarin oo shacabka Soomaaliyeed oo xumaanta Gaal Cabdi Wali ku baraarugsanaa ayaa cabiray dareenkooda farxadeed.
Waxa duco iyo bogaadin loo jeedinayo Al Shabaab ayaa dad badan ka yaabiyay waxaana la ogaaday in xoogaga jihaadiga ah ee halganka kula jira ciidamada shisheeye ay shacbiyad ku leeyihiin gayiga soomaali iyo geeska Afrika intaba.
Halkan ka degso Aratida shacabka ama hoos ka dhageyso.